‘Vanhurume zvibatei’ | Kwayedza
24 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-23T14:44:59+00:00 2020-01-24T00:00:43+00:00 0 Views
MUIMBI ari kusimukira mumusambo weSungura, Dennis Nyakudya (33) wekuDomboshava anoti vanhurume vanofanirwa kuzvibata uye vorega katsika kekutamba nevanasikana vevaridzi vachivapedzera nguva vasingazovaroora.
Nyakudya — uyo achangobva kubura nziyo mbiri (singles) dzinoti Pepukai naJokonia — anoti zvinorwadza kuona vamwe vanhurume vachikanganisa hupenyu hwevanasikana avo vamwe vacho vanongomitiswa vosiiwa vakadaro.
Anoti mukambo Jokonia anenge achiyambira vanhurume vajaira kutambisa vanasikana vevanhu vachizovasiya vachitambura kuti vasiyane nekatsika aka.
“Munharaunda, ndakaona kuti kune vamwe varume vanongoraramira kuporonga upenyu hwepwere apo vanenge vachiziva zvavo kuti havana chinangwa chekuvaroora. Saka vanenge vachingotamba nevana vevanhu vachitora mukana wepfuma yavanenge vainayo. Vana ava vanoendeswa kumafaro vachigocherwa vofunga kuti ndihwo upenyu hwakanaka asi mugumo vanomitiswa kana kupihwa zvirwere zvepabonde vosiiwa vakadaro,” anodaro.
Nyakudya anoti mukambo Pepukai, anenge achitsanangura kukosha kwakaita kubatana kwemhuri mukugadzirisa matambudziko avanenge vakatarisana nawo.
“MunaPepukai ndinoedza kurayira vedzimhuri dzakasiyana kuti kana vachinge vawirwa nematambudziko akadai sekufirwa, kusaroorwa kana zvimwe zvinhu zvinongoita serushambwa vanofanira kuisa misoro pamwechete kuti dambudziko iroro ringe richipera. Pfungwa iyi yakauya zvichitevera dzimwe mhuri dzatinogarisana nadzo munharaunda apo vanhu vari kungopera kufa uye vana vachiti vakaroorwa havatori nguva vasina kurambwa,” anodaro.
Madambarefu akaburwa nemuimbi uyu anosanganisira Yambiro Yakanaka (2016), Hazvibvumirwe (2017) naNyasha Dzenyu muna2018.
Zvisinei, muchinda uyu anochema-chemawo nenyaya yepairesi achiti iri kudzosera mabasa avo kumashure zvikuru.
“Sevaimbi, tine basa guru rekuimba, kutenga michina yekuridzisa uye nenguva huru yatitonora tichigadzirira nezvimwe. Asi kune mbavha dzinongomiririra kuita mubikirwa webasa ratinenge taita vachibva vachiriita ravo apo vanotengesa vachiita mari yakawanda kupinda isu. Ndiko kusaka pamwe pacho muchiona isu vaimbi tichigumisira tava kupinda mumaguta tichiedza kuzvitengesera tega mabasa edu nekuti nhau dzepairesi dzanetsa,” anodaro.
Nyakudya akaita zvidzidzo zvake zvesekondari paNyakudya Secondary School nepaParirewa High kuDomboshava kwakare.